Wiricheya ine Mabhureki
manyuwari Mawiricheya Uya Standard neBrake System
A wiricheya nemabhureki zvakajairika kuti Chinyorwa Mawiricheya, isu tinopa yakakura sarudzo ye wiricheya yemawoko ine mabhureki, kusanganisira mwenje Mawiricheya, kutakura Mawiricheya, isina kureruka Mawiricheya, bariatric Mawiricheya, tilt Mawiricheya, vakatsenhama Mawiricheya, uye chiremba wevana Mawiricheya.
Zvese zvebhuku redu Mawiricheya inouya yakajairwa nemabhureki, iwo anozvifambisa wega, uko mabhureki anoiswa pamusoro pemavhiri kuti ape nyore uye nekukurumidza kupinda kune braking system pasina kunzwa kusagadzikana kuita kudaro.
Isu tinopawo Mawiricheya nemabhureki ari shamwari Mawiricheya, zvinoreva kuti mushandisi anofanira kusundirwa nemumwe munhu, braking system pane aya marudzi e Mawiricheya anoiswa pamabhagi anobata anobuda kuseri kwe wiricheya, pamusoro pebackrest.
Izvi zvinobvumira muchengeti kushandisa braking system chero nguva panguva yekukwira. Vamwe vedu Mawiricheya inouyawo neese mabhureki masystem, iyo-inozvifambisa yega lever braking system, uyezve shamwari / muchengeti braking system.
Mabhureki ari akajairwa echinyorwa Mawiricheya yemhando ipi neipi ye wiricheya, inzira yekuchengetedza yakavakirwa pachigaro kudzivirira njodzi uye kupawo kufamba kwakapfava kuburikidza nekupfuura.
Aftermarket Kutsiva Brake Zvikamu
Iko zvakare kune sarudzo yekutenga aftermarket braking masystem, ayo atisingape asi anogona kukurumidza kuwanikwa kuburikidza nekutsvaga kweGoogle. Isu tinopawo zvikamu zvinotsiviwa zveedu mabhureki masystem, kana chigadzirwa chikaida nyowani brake cylinder kana mabhureki mabhureki, isu tinogona kupa izvi zvinotsiva zvikamu kuburikidza nenhamba huru yevatengesi vepamhepo vanogadzira zvigadzirwa zvedu.
apo wiricheya yakagadzirwa muGrisi yekare, panguva iyoyo uye kusvika pane imwe nhanho munhoroondo, Mawiricheya yakanga isina kuvakwa nemabhureki, zvichireva kuti kana munhu achisundidzirwa nemumwe munhu, iye munhu anosundidzira mushandisi angave nebasa rakazara rekubhurera pamberi kuitira kudzivirira tsaona.
Kuzvimiririra Mawiricheya kwakazovapo chete muchikamu chekupedzisira chezana ramakore rechimakumi maviri, uko rusununguko rwuri kusimudzirwa kubvumidza wiricheya vashandisi kuzvisundira ivo zvishandiso, pasina kudikanwa kwemuchengeti kana shamwari yekusundira chigaro.
Wikipedia - Mawiricheya
2 pfungwa pa "Wiricheya ine Mabhureki"
Yes, all wheelchair have brakes, but not all wheelchairs have handle bar brakes. Companion brakes are another word, but standard chairs all comes with brakes the users can access.
May 26, 2022 pana 4: 13 pm
Pingback: Do All Wheelchairs Have Brakes? Trust The Answer - Musicbykatie.com